Belarus: kuputsika pane vanoratidzira kunoenderera ... - Tepe RELAY
Kudzvinyirira kuri kuenderera mberi vachipokana nevaratidziri vanopokana nesarudzo, nekunyepa maererano nezvaAlexander Lukashenko, mutongi akatonga nyika kwenguva inopfuura kotara yezana. Le ushumiri
mukati yakazivisa China, Nyamavhuvhu 13, kusungwa kwevamwe vanoratidzira mazana manomwe ezuva rakatevera, zuva rechina rekuratidzira zvakanyanyisa, vachiponda vanhu vaviri.
Vanhu vanosvika zviuru zvisere nemazana matanhatu vakasungwa kubva muna Nyamavhuvhu 6 uye kuziviswa kwemhedzisiro yesarudzo dzemutungamiri wenyika, izvo zvakapa Lukashenko kukunda kwechitanhatu ne700% yevhoti. Kune vaimutsigira, chaive chitsva mune zvematongerwo enyika, Svetlana Tikhanovskaya, uyo akakunda, mushure memushandirapamwe uyo wakamutsidzira kushamisika zvisati zvamboonekwa mune yaimbova Soviet Republic. Mukadzi wepamba anoremekedzeka, anga auya kuzotapa murume wake akasungwa, aifanira kutiza nyika neChipiri mushure mekutyisidzirwa nevane masimba.
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare Mufananidzo wekumukira kweBelarusian, Svetlana Tsikhanovskaïa akamanikidzwa kutiza nyika yake
Shumiro yemukati meBelarusian yakati kuratidzira kuri kushaya simba "Asi huwandu hwehasha kuenda kumapurisa hunoramba hwakakwira", vachiona kuti mapurisa mapurisa 103 akakuvara, makumi maviri nevaviri vavo vari muchipatara. Hapana rondedzero yakazara yakaburitswa pamusoro pevaratidziri vanoshandiswa mabara enjodzi, mabatani uye ma grenade ane ruzha
NeChitatu manheru, zviremera zveBelarusian zvakasimbisa rufu rwemunhu ari muhusungwa, akasungwa panguva yekuratidzira, rufu rwekuwedzera kune iwo wemuratidzira neMuvhuro. Vakabvumawo chiitiko umo mabara anorarama akadzingwa neChipiri, akuvadza munhu muBrest, kumadokero kwenyika.
Verenga zvakare Sarudzo dzemutungamiri muBelarus: European Union inoshora sarudzo "isina kusununguka kana kuringana" uye inotyisidzira zvirango
Zviratidziro zvitsva zvakange zvakarongeka neChina kutaura kushora kwemurume ane huremu hweBelarus. Mangwanani, mumaguta akati wandei enyika uye kunyanya kuMinsk, vanhu vazhinji vakabuda kuzotevera kechipiri zuva rakateedzerwa kuumbwa ephemeral runyararo runyararo rwevanhu, maruva ari muruoko, chimiro chekuratidzira chisinganyanye kuita chisimba. yakamanikidzwa kupfuura kuratidzwa kwemasikati. Maketani aya anonyanya kugadzirwa nevakadzi, kazhinji vanopfeka zvichena.
Vakakurumbira venzvimbo imomo mumazuva achangopfuura vakawedzera kushoropodzwa kwevakuru. Quadruple Olimpiki biathlon mumiriri Darya Domracheva akaendesa ku Instagram account yake kuna Vatungamiriri veRiot control: DZVANYA UITI! Usarega kutyisa kuchirambira mumigwagwa ”. Akazonyora meseji yechipiri achifona "zvikamu zviviri" nyarara. Munyori Svetlana Alexievich, iye chete Belarusian yekuremekedzwa neNobel Prize, akapomera Mutungamiri Alexander Lukashenko neChitatu nekutungamira nyika yake "Hondo yevagari".
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare MuBelarus, "vanopfura vanhu vakaita semadhadha"
United States neEU dzakashora sarudzo dzekunyepedzera uye kudzvinyirira, nevanhu vekuEuropean vakatyisidzira Minsk nezvirango. Kuvakidzana muUkraine, kune chikamu chayo, kwakadana varudzi vayo kuti vadzivise kuenda kuBelarus, uye vakadaidzira kusunungurwa "Papo" yevaviri vekuUkraine vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa.
Charlotte Dipanda: hurumende iripo yasvika kumagumo uye yaizobatsirwa nekupa nzira - Vhidhiyo